Dr. Abiy Ahimad: Rakkoolee fulduratti qunnamuu danda'an - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri Muummee Abiy Ahimad taayitaa erga fudhatanii ji'oottan sadii ta'eera. Murteewwaan karaa siyaasaa, diinagdee, dippiloomaasiin eegalan namoota hedduutti abdii horaniiru.
Waggoota sadan darbaniif sochiin mormii biyyattii raasaa turee amma qabbanaa'uun hiriira mormii caalaa hiriira 'jijjiirama isaanii ni deeggara' jedhuutu mul'ataa jira.
Biyyattii nagaaf tasgabbiitti deebisuuf jalqabbiin abdii namatti horan jiraatanillee, ammas wantoonni yaaddoo ta'uu malan jiru.
Daanqaaleen ministira muummee mudachuu danda'an kallattii sadi irraa maddu jedhu hayyuun saayinsii siyaasaa Dr. Yohaannis Gadaamuu.
Qormaati inni jalqabaa paartiidhuma isaanii keessa ka'a jedhu.
"Hoggantoonni paartichaa duraan turan jijjiirama kana keessaa cinaatti dhiifamaniiru, qoodi isaanii hin mul'atu," jedhu.
Wanti danqaa itti ta'uu danda'u kan lammataa, walitti bu'iinsawwan bakka gara garaatti ka'u kan qe'eerraa buqqa'uu lammiilee biyyattiif sababa ta'aa jirudha jedhu.
Walitti bu'iinsawwan kunneen lammiilee Itoophiyaa walitti buusuu bira darbanii biyyatti biyyoota ollaa waliin waldhabsiisuu danda'u sodaa jedhu qabu.
Qoodni mootummaan Federaalaa rakkoolee kanneen furuu keessatti qabu cimaa ta'uu qaba jedhu.
Danqaa sadaffaa ta'uu kan danda'u jijjiirama amma eegalan kana attamiin itti fufsiisu kan jedhu ta'uu dubbatu.
"Waliigaltee Itiyoo-Eertiraa yoo fudhanne, murteewwan itti aanan gammachiisoo ta'uu dhiisuu malu," jedhu.
Gama biraan seerota fooyyessuu, waa'een alaabaafi heera mootummaa keessa deebi'anii ilaaluu jiraachuu mala jedhu.
Yaaddoo gama siyaasaafi nageenyaan jiruun alatti rakkooleen diinagdee danqaawwan ministira muummee mudachuu danda'ani.
"Rakkoo gama siyaasaan jiru gadi xiqqeessee ilaaluuf osoo hin taane, rakkoon karaa diinagdee jiru baay'ee na sodaachisa," jedhu ogeessi diinagdee Dr. Namarraa Gabeyehu.
Waggoota 27 darban namoonni maalaammaltummaafi yakkoota adda addaa keessatti hirmaatan, diinagdee biyyattii keessatti humna jabaa horataniiru jedhu.
Rakkoon hanqina sharafa alaa amma biyyattiin qabdu ji'oota muraasa darban kan ija baasee as baheefi shira warri kun xaxan ta'uu danda'as jedhu.
"Warri kun bulchiinsi haaraan kun akka inni danqamu shira diinagdee gara garaa raawwachuu danda'u," jedhu.
Kun jireenyi akka qaala'uufi carraan hojii haphachaa akka deemuu gochuu waan danda'uuf garmalee nama sodaachisa jedhu.
Diinagdeen gaafa rakkoo akkasii keessa galu ammoo rakkoon siyaasaas akka malee xaxaa ta'aa deema jedhu.
Dhaabbilee harka mootummaa turan yeroo kanatti gara dhunfaatti dabarsuunis biyyattii rakkoo hamaaf saaxiluu danda'a jedhu Dr. Namarraan.
"Kiraa sassaabdotni siyaas-diinagdee biyyattii dhuunfatanii jiran dhaabbilee kanneen deebisanii garaagarummaa qabeenyaa namoota dhunfaafi gareelee gidduu jiru bal'isuun biyyattii rakkoo hamaaf saaxila," jedhu.
Walitti dhufeenya biyyoota Afrikaa Bahaa
Goodayyaa suuraa Abbaa irruummaan motummoolii kanaa, fiirii godhachuu walii galtee isaanii gaaffii keessa galchuu danda'a.
Biyyoota Afrikaa Bahaa dinaagdeen qofa osoo hin taane nagaafi tasgabbiin waliittii fiduun barbaachisadha jedhu Yuniveersitii Finfinneetti barsiisaan kutaa Saayinsii siyaasaafi walitti dhuufenya idila adduunyaa Obbo Adaanee Alamaayyoo,
Eertiraa yoo fudhanne, gara walitti dhufeenyaa nagaatti ademuun biyyoota lamaan qofaaf osoo hin taane wal-dhaabdee naannicha keessa jiruufis furmaata ni laata jedhu.
Wagoota 20 darbaniif biyyootni lamaan waraana dhukaasa maleetti turan, kun nagaa dhabuu irra darbee dinaagdee isaani irrattiis dhiibba fideera jedhu.
Hariiroo biyyoota lamaanii irratti ammallee qabxiileen xiyeeffannoo barbaadan jiru jedhu.
"Lammileen biyya tokko biyya isaa biraa keessatti mirga akkamii qabaatu kan jedhu bu'uura seeraa qabaachuu qaba. Walitti dhufeenya dipiloomasii uumuun nagaa guutuu fideera jechuu waan hin taaneefi," jedhu.
Akka barbaadametti daangaa banuun walitti bu'iinsaa biraaf sababa akka hin taaneef eeggannoon ni barbaachisa jedhu.
Dhimma raawwii waliigaltee Aljeers waliin wal-qabatee Itoophiyaan karaa itti faayidaa ishee kabachiistu uumamu qaba jechuun Obbo Adaanee ni ibsu.
Abbaa irruummaan motummoota biyyoota ollaafi sochiin Al-shabaab danqaa biraa ta'uu danda'as jedhu.